“Ciidamada Laascaanood Baan Keeni Lahaa,” Saleebaan - somalilandlivemedia
“Ciidamada Laascaanood Baan Keeni Lahaa,” Saleebaan
14:47 19. March 2019
Hargeysa(SLL) Guddoomiyaha golaha Guurtida Somaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa sheegay in ciidanka Qaranka ee jiidaha Bari hawlgab ku noqday faramaha uu ku jiro, islamarkaana uu jeclaan lahaa in lagu soo celiyo Laasnaacood.
Guddoomiyaha oo shalay mudaneyaasha la hadlayay ayaa u jawaabay xildhibaanno dhalliilay in xilligan ciidanka Qaranku isku fidiyo Bariga gobolka Sanaag waxaanu yidhi “Arrintan ciidamada, waar ciidamadu dalkoodii bay joogaan meel walbana way tagayaan. Maxaa looga cabanaya? Dee Badhan, Laascaanood, Saylac iyo Booramaba way tagayaan, Maxaa looga cabanayaa? Wax ay taraan mooye wax lugooyo ah oo ay soo kordhiyaanna ma hayno,” Sidaas ayuu yidhi guddoomiye Saleebaan.
Guddoomiyaha oo ka sii hadlaya waxtarka ciidanka Qaranka ayaa intaasi raaciyay “Waxaan jeclahay in ay Laascaanood ku soo noqdaan ee waanan helayn, inaga iyo dadka joogayba waxtar bay lahaayeen oo bulshaday ka qayb galayeen, hadda halkaas bay maxaabiis ku yihiin Tukaraq iyo hareeraheeda marka ciidamadu lugooyo ma wadaan ee yaynaan balo abuurin,” Sidaas ayuu yidhi guddoomiye Saleebaan.
Ciidamada Qaranka Somaliland ayaa horraantii sanadkii hore tagay degmada Tukaraq waxaanu madaxweyne Biixi diiday qorsheyaal la doonayay in dib loogu soo celiyo fadhiisimadoodii agagaarka Laascaanood mana cadda in guddoomiye Saleebaan ka soo horjeedo joogitaanka Ciidanka Qaranka ee jiidaha hore iyo in kale.
Waftigii Khaatumo Ee Cali Khaliif Hogaaminayay Oo Gaadhay Magaalada Widh-widh
Hargeysa:-Koox Uu Dilaalka Baashe Moorgan Daaqada Ka Quudiyo Oo Maanta War-baahinta La Haddley Iyo Xildhibaan Ay Weerareen Kooxdanu Video
Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Fariin U Diray Shacabka Reer Gabiley Iyo Tog-wajaale Video
Xildhibaano Ka Haddley Ciidamo Ay Xukuumaddu Soo Dhoobtey Xarunta Golaha Wakiilada Video
Newer PostMaxay Tahay Ujeedada Weftiga Ereteriya?
Older Post Magac-yadda 23-kii Sarkaal Ee Inqilaabka Sameeyay Somaliland 1961